Ungamamela njani kwirediyo kwi-intanethi nakwisiphi na isixhobo | Iindaba zeGajethi
Ungamamela njani kwirediyo ekwi-Intanethi nakwisiphi na isixhobo
UIgnacio Sala | | Abadlali, Ukusasaza
Okwangoku yonke into okanye phantse yonke into yenzeka kwi-intanethi. Enkosi kwi-intanethi singamamela nayiphi na ingoma esiyifunayo, sibukele isiqephu samva sothotho lwethu esizithandayo okanye ii-premieres zamabhayisikobho zamva nje. Sinokufikelela kwimithombo yendabuko, iimagazini kunye Nokuba unomathotholo wobomi bonke.
Ngokufika kwe iinkonzo zokusasaza umculo, oonomathotholo babone ukuba ishishini labo lisehla njani kancinci kancinci. Abantu bafuna ukumamela iingoma zabo abazithandayo, ngaphandle kweentengiso kwaye ngaphandle komsasazi ekufuneka eyenzile paripe ngaphambi kokuyibeka.
Olunye uncedo lwe-intanethi, olunxulumene noonomathotholo, kukuba lusivumela ukuba simamele izikhululo zethu esizithandayo kwikhompyuter yethu, ngaphandle kokusebenzisa iiradiyo zethu zobomi bonke, iiradiyo ezibonakala ngathi kuphela bayabamba Ama-40 okanye iRadio 3.
Kananjalo, kwabo banethamsanqa, okanye ngelishwa, ukuba baphile phesheya okanye bachithe ixesha elide, yindlela elungileyo yokugcina iindaba zelizwe labo ngaphandle kokuba jika kumabonakude wesathelayithi.
Eyona ndlela ikhawulezayo yokufikelela kwizikhululo zethu esizithandayo ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yabo. Kodwa kukho ubomi obungaphaya kwezitishi zobomi bonke. Enkosi kwi-intanethi, sinako fumana izikhululo ezisuka kweminye imimandla okanye amazwe ezihambelana nezinto esizithandayo, iimfuno okanye izinto esizikhethayo.
Ii-smartphones zokuqala ezazisungulwa kwimarike, idityaniswe ne-chip ye-FM, i-chip evumela ukumamela kunomathotholo wesiko (basebenzise ii-headphone njenge-eriyali). Ngelishwa, kubonakala ngathi abavelisi babheja kancinci nangaphantsi kulo msebenzi nangona uluncedo olukhulu xa iintlekele zemvelo zenzeka kwaye iindlela eziphambili zonxibelelwano ziyekile ukusebenza.
1 YeRadio Garden
6 Irediyo ye-Intanethi
7 Iindlela ezizezinye
YeRadio Garden yenye yeenkonzo zewebhu ezaziwa kakhulu nezibanzi zokumamela izikhululo zerediyo ezivela kwihlabathi liphela. Ukuba isikhangeli sethu sivumela amaphepha ewebhu ukuba angene kwindawo esikuyo, izakusibonisa ezona zikhululo zikufutshane kwindawo yethu, ethi nangona inokubonakala ngathi ayinangqondo, ayisiyiyo.
Kuxhomekeka kwindawo esihlala kuyo, iyakubonisa ezona ndawo zikufutshane apho zifumaneka khona izitishi, nangona izakukhangela amaphondo nakwamanye amazwe. Ukuba isikhululo esisifunayo asifumaneki, sinako gcwalisa ifom ezakufakwa kule nkonzo.
Ukuba siyalazi igama lesikhululo esifuna ukusimamela, singangena kuyo siye ngqo esikhululweni. Ukuba oku akunjalo, kwaye sifuna ukumamela, umzekelo, nasiphi na isikhululo eVenezuela, sinako hamba uye kwilizwe lonke kwaye ucofe kumachaphaza ahlaza aluhlaza amele izikhululo zikanomathotholo zelizwe.
I-Radio Garden ikwafumaneka ngohlobo lwe Isicelo se-iOS kunye ne-Android, isicelo esinokuzikhuphelela simahla kwezi linki zilandelayo.
Umthuthukisi: KwiRadiyo yeGadi BV
TuneIn yenye yeenkonzo ezaziwa kakhulu ze mamela irediyo ye-intanethi nakweliphi na ilizwe. Isivumela ukuba sifikelele kwizikhululo zikanomathotholo ezingaphezu kwe-100.000 kwihlabathi liphela ngentengiso, nangona sinako ukuhlawula umrhumo wenyanga ukuthintela iintengiso kwaye ngequbuliso sikwazi ukonwabela imidlalo yeNFL, MLB, NBA kunye neNHL.
Inenani elikhulu lezikhululo zolwimi lweSpanish, zombini eSpain naseLatin America, nangona abaphulaphuli bayo baseMelika, ukusuka apho sinokumamela khona inani elikhulu lezitishi kwilizwe liphela. Nathi sinako ukwenjenjalo mamela ipodcast efanayo esinokuyifumana kwelinye iqonga.
Iyahambelana zombini Amazon Echo njenge Ikhaya leGoogle isuka kuGoogle ukongeza ekubeni iyafumaneka kwizithethi zabavelisi Sonos. Ikwafumaneka kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android, usetyenziso onokuzikhuphelela simahla kwezi linki zilandelayo.
TuneIn Radio: Iindaba ze-AM FMMahala
TuneIn Radio: Iindaba, Ezemidlalo kunye neZikhululo zoMculo ze-FM
Si buscas Izikhululo eziseSpain, RadioFy le nkonzo ubuyikhangela. I-RadioFy isinika ujongano olulula kakhulu apho kufuneka sibhale khona igama lesikhululo esifuna ukusimamela okanye ukuskrolela iphepha de sifumane isikhululo esifuna ukusimamela, apho ziboniswa kakhulu.
IiWebhusayithi isibonisa isalathiso samazwe apho singamamela khona kwizikhululo zikanomathotholo, ke lolona khetho lufanelekileyo lokucinga ukuba ujonge izikhululo ezivela kumazwe athile. Ngokucofa kwilizwe ngalinye, singena kwiwebhusayithi yelizwe ukusuka apho sinokufikelela khona kwizikhululo ezikhoyo kwelo lizwe.
myTurnr lelinye lamaphepha ewebhu asivumelayo ukufikelela kwizikhululo zikanomathotholo phantse kuwo onke amazwe ehlabathini. Nje ukuba ungene kwiwebhusayithi yakho, izikhululo zerediyo zelizwe esikuzo ziya kuboniswa. Ngakwicala lasekhohlo, sinokukhetha ukuba sifuna ukubonisa kuphela izitishi kwindawo yethu okanye kwingingqi.
Ukuba uthanda iipodcast, kwi-MyTurner, nayo uya kufumana iintlobo ngeentlobo, ngokufanayo sinokufumana nakweyiphi na iqonga lePodcast. Ikwafumaneka kwizixhobo eziphathwayo ngendlela yesicelo, ke ukuba asinayo ikhompyuter, singasebenzisa i-smartphone okanye ithebhulethi yethu.
Irediyo ye-IP: Irediyo yeTuner FMMahala
MyTuner Radio eSpain kwi-intanethi
Umthuthukisi: Ukuzalwa kwakhona-iRadiyo, iiPodcasts, iMidlalo
Kodwa ukuba into esiyifunayo kukuphulaphula ezinye izikhululo, ukufumanisa iingoma ezintsha, mamela ezinye iintlobo zomculo, Akukho nanye kwezi ingasentla iyasisebenzela (ngokwentelekiso) njengeRadio ye-Intanethi. Ngokusebenzisa Irediyo ye-Intanethi Singamamela kwizikhululo zikanomathotholo ngohlobo lomculo abasasazayo, hayi ngegama lesikhululo okanye kwindawo ekuyo.
Nje ukuba ungene kwiwebhu, ezona ntlobo zidumileyo ziboniswa. Xa ucofa ezi ntlobo, ziya kuboniswa zonke izitishi ezibonelela olo hlobo lohloboNokuba yipolka, ifunk, umphefumlo, iTejano, i-anime, ezothando, ukuphola, ukubonwa, ukungqungqa, umdaniso, ijezi, iblues, ilitye leklasikhi, ilizwe, isinyithi, isalsa, ihip hop ...
Njengoko sinokubona ukhetho lokufumana iingoma ezintsha esizifumana kwiRadio Internet, asizukuzifumana kwizikhululo zemveli zalo naliphi ilizwe. Ukuba sifumana isikhululo esisithandayo, sinako khuphela uluhlu lwe .m3u ukuyivelisa nakwesiphi na isicelo esifanelekileyo ngaphandle kokusebenzisa iwebhusayithi.
I-Intanethi igcwele iinkonzo ezisivumela ukuba simamele kwizikhululo zethu esizithandayo. Ukuba phakathi kweendlela ezahlukeneyo endikubonise zona kweli nqaku, awusifumani isikhululo osifunayo, mhlawumbi ayikho. Sukujonga phambili, njengoko ezi nkonzo zezona zibanzi zifumanekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Abadlali » Ungamamela njani kwirediyo ekwi-Intanethi nakwisiphi na isixhobo
HONOR SmartLife: Yonke into eboniswe yi-Honor yokuhlaziya ikhathalogu yayo
Owona msebenzi uphambili kwizixhobo (ngeveki kaMeyi 18 ukuya ku-24)